Gabatee Cuqoo Fayyadamuun, Gabateewwan Gulaaluu
Gabatee cuqootiin, hagamtaa tarjaawwan gabatee, jijjiiruu fi haquu nidandeessa.
Tarreewwaani fi Tarjaawwan Haaromsa.
Tarjaa haaromsuuf man,ee gabatee keessa qaree godhii gadi dhiibuuni fi Alt,xiyya mirgaa ykn bitaa cuqaasi.Bal,ina gabatichaa osoo hin jijjiriin tarjaa haaromsuuf ,Command+OptionCtrl+Altgadi dhiibuun xiyyoolee mirgaa ykn bitaa dhiibi.
Keessoo gabatee bitaa guddisuutiif, OptionAlt+Shift gadi dhiibuun, isaa boodaa xiyyaa mirgaa dhiibi.
Hagamtaa tarree tokko jijjiiruuf, qaree tarree keessa kaa'i, OptionAlt dhiibitii, kana booda xiyyawwan olii yk gadee dhiibi.
Fuula irraa gabatee garagadiitti siqsuudhaaf, OptionAlt+Shift dhiibi, kana booda xiyya gadee dhiibi.
Tarjaawwan yk tarreewwan, saaguu fi haquu
Tarjaa tokko saaguuf, man'ee gabatee keessa qaree kaa'i, OptionAlt fi Insert walitti dhiibi, gaddhiisi, kana booda xiyyaa bitaa yk mirga dhiibi.
Tarjaa tokko haquuf, gabatee isa haquudhaaf barbaaddu keessa qaree kaa'i, OptionAlt fi Delete irraa duubaan dhiibi, gaddhiisi, kana booda bitaa yk mirga xiyyaa dhiibi.
Tarree tokko saaguuf, man'ee gabatee keessa qaree kaa'i, OptionAlt fi Insert gadi dhiibii, gaddhiisi, kana booda xiyya olii yk gadee dhiibi.
Tarree tokko haquuf, gabatee isa haquudhaaf barbaaddu keessa qaree kaa'i, OptionAlt fiDelete irraa dhiibi, gaddhiisi, kana booda xiyya olii yk gadee dhiibi.
Title is: Gabatee Cuqoo Fayyadamuun, Gabateewwan Gulaaluu